fort_wayne_intl sano 2 11 bilood ka hor #686
Hadda waxaan socodsiiyay gegida dayuuradaha Fort Wayne Int ee cusbooneyd ee installer.into oo aan anigu haysto. Kadib waxaan u wareejiyaa Sawirka / Dheerta aniga Addons galka. Laakiin markan waxaan arkaa in labo fayl loo abuuray (1) fort_wayne_intl_airport_fsx iyo (2) fort_wayne_intl_airport_fsx_Marka 2aad. Sidee ayaan u maareeyaa galka Qaybta 2 Ma waxaa qasab ah in loo mideeyo sidii haddii qayb2 ay tahay casriyeyn iyo dib-u-tiris ku ah feylasha asalka ah.
caawimaad kasta oo wax ku oolka ah!
fort_wayne_intl sano 2 11 bilood ka hor #687
Waa maxay sababta aad jeclaan lahayd si loo soo dajiyo muuqaal ah gacanta? The auto-rakibayo qaban karto shaqo ee lagtiisa kasta socon.
"fort_wayne_intl_airport_fsx"wuxuu yimaadaa booska koowaad iyo" fort_wayne_intl_airport_fsx_part2 "waxay ku jirtaa booska labaad ee adiga FSX maktabadda muuqaalka.
Haddii aad rabto in aad gacanta ku rakibi muuqaal tan aad leedahay si ay awood labada fayl maktabadda muuqaal ah.
fort_wayne_intl sano 2 11 bilood ka hor #689
Waad ku mahadsan tahay macluumaadkaaga. Sababta aan doorbidayo inaan ku sameeyo rakib gacanta waa. Waxaan heystaa SDD u go'an aniga addon Muuqaal muuqaal ah oo anigu ma doonayo in kuwa wax ku shaqeeya ay ku dhigaan faylalka muuqaalka "SSD" ee ku guuleysta 'win 10'. Anigu khabiir ma ihi laakiin waxaan raacayaa uun talooyinka lagu bixiyo golayaasha kale iwm.